ILOTTO KAZWELONKE LASENINGIZIMU AFRIKA-ILOTTO YANSUKU ZONKE 2022 - OnlineCasinosOnline
Ikhaya / isiqondisi se-lotto sase-ningizimu afrika esiku-inthanethi / ilotto kazwelonke laseningizimu afrika-ilotto yansuku zonke
ILOTTO KAZWELONKE LASENINGIZIMU AFRIKA-ILOTTO YANSUKU ZONKE
I-South Africa National Lottery yasungulwa nguhulumeni ngo-2000 ukunikeza izakhamizi zayo indlela esemthethweni nephephile yokugembula. I-lottery ilawulwa futhi yenganyelwe yiNational Lottery Commission. Opharetha abazimele bavunyelwe ukubhida ilungelo lokusebenzisa iLottery kaZwelonke ngezikhathi ezithile. Opharetha wokuqala kwakungu-Uthingo, walandelwa nguGidani ngo-2007. Opharetha wamanje u-Ithuba wathola amalungelo ngo-2015. Imidlalo yabo yeLotto nePowerball ivulekele bonke abantu abadala abaneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala.
IDaily Lotto ingukuhluka okusha sha komdlalo odumile we-lotto owethulwe yi-Ithuba ngoMarch 2019. Esikhundleni sezinombolo ezingu-52 kweminye imidlalo ye-lotto, abadlali beDaily Lotto kufanele bakhethe ezinombolweni ezingu-36 ezidlala lo mdlalo. Lo mdlalo uqinisekisa imibani yemiklomelo esheshayo kusukela ukudonsa kwenzeka njalo ebusuku ngo-9.
Ungayidlala Kanjani I-Lotto Yansuku zonke?
ILotto yansuku zonke inikeza abadlali izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-36. Ukudlala lo mdlalo, kufanele ukhethe noma yiziphi izinombolo ezinhlanu. Uma ufuna ukushiya izinto zivele ngenhlanhla, ungakhetha inketho yeDraw Quick kumthengisi noma ku-inthanethi. Le nketho ikunikeza izinombolo ezinhlanu ezingahleliwe. Indlela elula yokudlala iDaily Lotto ukuthenga isiliphu sokubheja esitolo esigunyaziwe sokuthengisa. Ungathola izikhungo ezinjalo kuyo yonke iNingizimu Afrika.
Uma uthola isiliphu, ungakhetha izinombolo ezinhlanu ofisa ukubheja kuzo. Sebenzisa ipeni noma ipensela ukumaka lezi zinombolo kusiliphu. Kukhona futhi inketho yokusebenzisa izinombolo ezifanayo zokudonsa okuningi. Uma ufuna ukusebenzisa lesi sici, maka inketho efanelekile yokudweba okuningi kusilayidi. Intengo yokubheja izokwenyuka uma ukhetha ukusebenzisa iMulti-Draw.
ILotto yansuku zonke ngumdlalo wamathuba futhi udinga inhlanhla enkulu ukunqoba i-jackpot. I-Ithuba ilinganisela ukuthi amathuba okuwina i-jackpot ayi-1 kwabangu-376,992. Kepha kunethuba eliphakeme lokuwina imiklomelo esezingeni eliphansi. Isibonelo, kunethuba elilodwa kwangu-81 lokuthola izinombolo ezi-3 ezifanele, nelilodwa kwayisishiyagalombili ithuba lokuthola izinombolo ezimbili ezifanayo.
Dlala i-Daily Lotto Online
Kubadlali abagembula abasebenzisa i-inthanethi, iSouth Africa National Lottery inewebhusayithi ezinikele kanye nohlelo lokusebenza lwefoni ephathekayo. Ungabhalisa i-akhawunti online usebenzisa enye yalezi zinketho. Uzodinga ukuhlinzeka ngegama lakho kanye nomazisi ukuze ubhalise i-akhawunti. Lapho usungene ku-akhawunti, ungafaka imali esikhwameni esiku-inthanethi bese uqala ukuthenga amathikithi e-lotto.
Wonke amadiphozi nokukhishwa kwemali esikhwameni sakho se-Ithuba kukhonjelwa kuzimali zokucubungula. Ungahlola yonke imininingwane eku-inthanethi kuwebhusayithi ye-opharetha. Ukubheja nge-SMS kuyatholakala nase-Ithuba uma usubhalisile ku-inthanethi. Ungasebenzisa ama-USSD ukukhetha izinombolo ezinhlanu zokubheja kwakho kwe-Daily Lotto. Bheka iwebhusayithi ye-Ithuba ukuze ufunde kabanzi.
Kubiza kangakanani Ukudlala ILotto Yansuku zonke?
IDaily Lotto ayinayo eminye imidlalo yebhonasi. Ngakho intengo kuphela okuzodingeka uyikhokhe ukuze udlale ngu-R3 ukubheja ngakunye. Uma udlala ngeziliphu zokubheja ungaxhunyiwe ku-inthanethi, kunomkhawulo omkhulu ongu-R150 ngesiliphu ngasinye sokubheja.
Kungani Udlala ILotto Yansuku zonke?
Ukuze uthole ama-jackpots aguqula impilo, ungabheka iLotto nePowerball ejwayelekile evela e-Ithuba. Uma kuqhathaniswa, iDaily Lotto inechibi elincane lomklomelo. Lokhu kungenxa yokudonswa kwansuku zonke nomthetho ovimbela ukudluliswa kokuwina lapho kungekho owinile i-jackpot.
Yize lokho kungabonakala njengesivumelwano esibi, empeleni, kuhlukile impela. ILotto yansuku zonke iqinisekisa ukukhokhwa okugcwele kwemali yomklomelo nsuku zonke, noma ngabe akekho umdlali oqagela izinombolo ze-jackpot kahle. Lokhu kusho ukuthi abantu abaningi bazothola isabelo esiphezulu somklomelo, kunokuba umuntu oyedwa angacebile.
Futhi njengoba intengo yethikithi le-lotto liphansi, futhi nama draw ansuku zonke, kuyisidididi ukubeka amaRandi ambalwa kuDaily Lotto nsuku zonke. Ngethuba elijwayelekile lokuwina eli-1 koku-7, uba sethubeni elihle lokuthola okungenani amaRandi ayi-10-15 wokutshala kwakho imali uma uthola izinombolo ezimbili nje kahle.
Abanqobi be-lucky jackpot bangalindela ukuhamba nemali efinyelela ku-R200,000 noma ngaphezulu uma kungukuthi yibo kuphela abazithole kahle zonke izinombolo ezinhlanu. Lokho kungaphenduka uma kuqhathaniswa nezigidi ezikhokhelwe amaLottos amakhulu nePowerball, kepha nge-R3, kusabuyiswa kahle impela!
Opharetha be-National Lottery
Uhlelo lokubhida ngeLottery Operator eNingizimu Afrika seluqubule izingxabano eziningi phambilini. UGidani wawina lesi sicelo ngo-2007 ngemuva kokuthi inselelo yezomthetho eyayivela ku-opharetha wangaphambilini ishaywe yinkantolo. Ngo-2015, kwaba yisikhathi sikaGidani sokuya eNkantolo ukuyobhikisha ngesikhathi u-Ithuba ekhethwa njengompetha owinile. Futhi isinqumo esalandela seNkantolo eNkulu siqinise isikhundla sika-Ithuba njengomphathi wezomthetho weSouth Africa National Lottery.
Eminyakeni emine edlule, benze umsebenzi omuhle wokuqhuba iNational Lottery, befaka ukuzethemba kubadlali ngokuletha izinkokhelo ezisheshayo futhi bethula nemidlalo emisha emnandi. Banikela nangengxenye yemali yabo engenayo esikhwameni sokusiza.
Ingabe I-Daily Lotto Draw Yenzeka Nini?
Umdwebo weDaily Lotto kuhlelwe ukuthi ube khona njalo ebusuku ngo-9 PM SAST. Ukuthengiswa kweLotto kosuku kuqeda isigamu sehora ngaphambi kwalokho, ngabo-8: 30 PM kubathengisi kanye naku-inthanethi. Akukho ukusakazwa bukhoma weDaily Lotto Draw noma kuphi. Kepha abadlali bangazithola izinombolo eziwinayo ngabo-9: 30 PM kuwebhusayithi ye-National Lottery, noma kunoma yisiphi isitolo esigunyaziwe sokuthengisa.